Dzivirira yako hemp purazi kubvumirana nechibvumirano chakanyorwa
Hemp Farm Kurima kana Crop Kugovera
Ndingabhadhara purazi rangu rehemp?
Kana murimi aine rezenisi yekurima hemp, unogona kubhadhara purazi rako. Murimi wepakati haana muridzi wepasi rese raanorima. Uye, muI Illinois, iyo hemp purazi rezinesi kunyorera inobvumira munhu ari kunyorera kuti aratidze kuti inoreja purazi raanoda kurima hemp.
Sei Uchiregedza Hempu Yako Hemp?
Mazhinji mapurazi haana mari yakanyorwa yekubhadhara, kana yekunyorwa lease ndeye makumi emakore. MuI Illinois vanhu vanogona kuve nemuromo wepurazi rekurejesa, asi hemp haina kufanana nebhinzi kana soy - hemp inoda rezinesi kubva kuhurumende uye ine marambidziro ekuti ndiyani anogona kuirima kana kuishandisa. Saka ipfungwa yakanaka kudzivirira purazi rako nechinyorwa chakanyorwa.
Isu tinokurukura nzira dzakajairika dzekubhadhara kwezvirongwa zvekupurazi uye nekupa zvakanakisa zvitatu zvikwaniriso zvekuve nemubhadharo wakanyorwa webhizimusi rako rekurima rehem. Bvunza a gweta rehemp nezve bhizinesi rako kuve nechokwadi chekudzivirirwa kubva panjodzi dzisingazivikanwe.
Cash Rent kana Crop Mugovha wePurazi Kubhadhara Mari.
Kurima kubhadharwa kunowira mumapoka maviri makuru: Cash Rent, kana Crop Kugovera. MuI Illinois, uko 2019 ichave yekutanga gore hemp inorimwa, chero mhando yekubiridzira yakajairika. Kubhadhara purazi kungangoita kudaidzira kubhadhara mari sezvainoita pakugovana zvirimwa, asi hemp ingangozvikweretesa kuchikamu chechirimwa nekuda kwezvikonzero zvinokurukurwa pasi apa.
Zvepamusoro Zvitatu Zvinobatsira zveYakanyorwa Kupa kwePurazi
ramba uchiwirirana neakanakisa maindasitiri maitiro
tsanangura zvakajeka mazwi echibvumirano pamwe nedziviriro kune vese murimi uye muridzi wevhu
seti kubhadhara mazwi se "mari yerendi" kana "govana mbeu"
Cash Rent Chibvumirano
Mari yemubhadharo wepurazi remari iri nyore nyore, mari yekurenda. Murimi wehemp anoisa dhora pamari yekuti achabhadhara marii pahekita. Kazhinji mabhiri maviri chete anobhadhara anouya nekuda kwegore rekurimwa, rimwe rinenge munaKurume 1, uye rimwe rinenge Gumiguru 1, kana kana kukohwa kwapinda kuzoshandura chirimwa chiita.
Chirimwa chinowanzotengeswa kuburikidza nevatengesi vezviyo gore rese - asi segore ra2019 riri gore rekutanga rechirimwa - kushambadzira zviyo uye zvibvumirano zvenguva yemberi hazvigone kushandiswa kutengesa chirimwa zvakasununguka senge zvimwe zvigadzirwa.
Cash Rent purazi inokweretesa kutengeserana inotora chikamu mumubhadharo kubva mukutengesa kwechirimwa nekufungidzira chaiko kweareti inozovakirwa.
Kurima Mahosi hakufanire kunge kuri kunyora - asi kubviswa kwepurazi kushoma kunoita.
Crop Goverana Zvibvumirano
Kana murimi nemuridzi wemunda vakabvumirana kushanda pamwe chete kuti vakure uye vakohwe gohwo, ipapo goho rinogovaniswa Mugove wezvirimwa unokwanisa kunzi kurima. Muridzi wevhu anopa acerage yake, murimi anopa vashandi pamwe nemidziyo, uye ivo vaviri vanogovana mumhindu kana kurasikirwa.
Iyo yeCannabidiol (CBD) kuputika kwemusika kuri kusundira akawanda emabasa ekurima hemp ekurima. Varimi vazhinji vachipinda muindastiri vanoda kurima hemp seyuri nani mari yezvirimwa pane izvo zviripo. Brightfield Group anotenda kuti CBD ichava madhora mabhiriyoni mazana maviri emadhora mumakore mashoma apfuura.
Nekuda kweiwo musika economisheni, uye kufara kuri muindastiri, zvirimwa zvekudyidzana zvibvumirano zvinogona kupa iyo hemp varimi nzira yekugovana purofiti nevaridzi vayo. Chibvumirano chakapihwa chekugovera mari inobhadharwa uye purofiti inogona kunyorwa chero nzira iyo murimi uye muridzi wemba anoda.
Ndeipi purazi Yekupuritsa yakanakira Hempu Yako Hemp?
Izvo zvinoenderana nezvauri kuda kubva pakuburitswa. Iwe unoda here kufungidzira kubhadhara uye kuti muridzi wevhu agare kunze kwebhizimusi rekurima? Wadaro, funga nezvesarudzo yekubhadhara mari. Asi chenjerera iyo CBD boom yekuputika uye mutengo weCBD akapfuma hemp kudonha. Kudonha mitengo kunogona kuita kuti iyo yakakwira mareti kubhadhara kurwadza kune yekutanga hemp varimi.
Iye muridzi wepanyika ane zviroto zvake zvekubudirira kubva kuCBD musika bonanza, uye uine hukama hwakanaka hwekushanda nemurimi wehemp? Ipapo chibvumirano chekugovera zvirimwa chinoita kuti mapato ese maviri apatsanure mutengo uye purofiti iri muindasitiri itsva yehemp.
Hapana mumwe mhinduro iri chaiyo, asi pane chikonzero chimwe chikuru chekuti hemp yako yekupurazi inofanirwa kunge iri mukunyora.
Hemp inyowani uye yakanyanya kuderedzwa
Iyo hemp inogona kungokura chete kana murimi aine rezinesi iro rinopa masimba ekuriisa. Murimi wehemp haakwanise kuseta iyo hemp kunze kwekunge anyoreswazve sahemp processor. Iyo nyika ichaongorora iyo hemp uye kuwona kuti iko kushanda kuri kurongeka.
Kwete kungoita chete yakanyorwa hemp purazi kubhangi inopa iyo chaiyo mazwi echibvumirano icho vaviri mapato, zvakare zvinoratidza kuti yako hemp purazi iri kutevedzera nemaitiro akanakisa muindasitiri. Kuve nemafambisirwo uye maitiro munzvimbo iyo yako hemp purazi ichaibatsira kuti irambe iri mukuteerera uye pakanaka pamwe nehurumende inopa yako hemp purazi.
Rombo rakanaka kukura chirimwa chako chitsva. Uye fona kana iwe uchida kutaura nevamiriri vedu pane yako hemp venture.